प्रदेश नं. २ मा कांग्रेस र माओवादीको साथ उपेन्द्र पक्षलाई | प्रदेश पालिका
गृहपृष्ठ देश प्रदेश नं. २ मा कांग्रेस र माओवादीको साथ उपेन्द्र पक्षलाई
प्रदेश नं. २ मा कांग्रेस र माओवादीको साथ उपेन्द्र पक्षलाई
२६ जेठ, जनकपुरधाम ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालको उपेन्द्र यादव पक्ष र नेपाली काँग्रेसबीच सत्ता सहकार्यका लागि सहमति भएको छ । यससँगै अब प्रदेश २ मा जसपा (यादव पक्ष) नेतृत्वको सरकारमा काँग्रेस र माओवादी केन्द्र सहभागी हुने निश्चित भएको छ ।
मंगलबार भएको सहमति अनुसार काँग्रेसले तीन र माओवादी केन्द्रले दुई मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुनेछन् ।
प्रदेश २ सरकारमा १० वटा मन्त्रालय छन् । त्यसमध्ये पाँच वटा मन्त्रालय जसपाले राख्ने र बाँकी पाँच वटामा तीनवटा काँग्रेस र दुईवटा माओवादी केन्द्रले लिने सहमति भएको जसपा नेपाल प्रदेश २ का एक प्रदेशसभा सदस्यले जानकारी दिए ।
जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले महन्थ ठाकुर पक्षका एकजना मन्त्री र तीनजना राज्यमन्त्रीलाई सरकारबाट निलम्बन गरेपछि काँग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग सत्ता सहकार्य गरेको हो ।
यो सहमतिका लागि दुवै पक्षबाट छ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । आज एकपटक कार्यदलको पुनः बैठक बस्नेछ र यो सहमतिलाई अन्तिम रुप दिइ सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।
त्यसपछि साँझमा नवनियुक्त मन्त्रीको शपथ हुने बताइएको छ । स्रोतका अनुसार काँग्रेसबाट रामसरोज यादवको नेतृत्वमा र माओवादी केन्द्रबाट भरत साहको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने बताइएको छ ।
यसअघि मन्त्रालयलगायतका विषयमा काँग्रेससँग विभिन्न चरणमा छलछल भएपनि ठोस सहमति हुन सकेको थिएन । जसपाभित्र विवाद बढेपछि प्रदेश सरकारलाई सुरक्षित राखिराख्न यादवले काँग्रेस र माओवादीसँग सहकार्यको हात बढाएको हो ।
Previous articleअसारदेखि लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लैजाने तयारी
Next articleप्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख ऋण दिने कार्यक्रम छिटो कार्यान्वयन गर्न माग